Safarka Prem Rawat: Horyaalka Nabadda Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Safarka Prem Rawat: Horyaalka Nabadda Adduunka
dhaqanka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Prem Rawat iyo Wasiirka Cadaalada A. Bonafede
Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Talyaaniga ayaa martigaliyay Prem Rawat waa markii afaraad shir ay soo agaasimeen Senator Arnaldo Lomuti oo ay iskaashanayaan Piero Scutari iyadoo uu goobjoog ka ahaa Wasiirka Cadaalada Alfonso Bonafede iyo Senator Ms. A. Maiorino.
Shirka, oo si toos ah loola socday adduunka oo dhan, waxaa lagu soo bandhigay ikhtiyaar khibrad waxbarasho, awood u leh sameynta muwaadiniin ka warqaba una furan rajo nolol wanaagsan. Prem Rawat, “Safiirka Adduunka ee Nabadda,” aqoonsi uu ku helay baratakoolkii lagu saxiixay baarlamaanka Yurub 2011, wuxuu naftiisa u hibeeyay horumarinta nabadda, wanaagga, iyo dib-u-waxbarashadda "dembiilayaasha" xabsiyada ku jira.
Ilaa maanta, Prem Rawat wuxuu ku faanaa diiwaanka la kulanka 100,000 oo maxaabiis ah in ka badan 600 oo xabsi oo ku yaal qaaradaha oo dhan si uu ula xiriiro qiimaha xorriyadda, dib ugula soo noqoshada bulshada dhamaadka xukunka, iyo inuu dhiirrigeliyo yareynta dambiyada tartiib tartiib iyadoo ciqaabta ay leedahay awgeed. iyada oo faa'iido u ah ka-dhaafitaanka kharashka ee dawladaha.
U doodaha nabada ayaa sharaxaad ka bixiyay daraasad seddex sano qaadatay oo lagu soo bandhigay Jaamacadda Harvard oo ay sameysay Wasaaradda Caddaaladda ee dowlad Hindi ah taas oo 5,000 oo maxaabiis ah ay ka qeyb qaateen natiijo la yaab leh: hoos u dhaca heerarka dib u soo noqoshada iyadoo in ka yar 100 maxaabiis ah ay ku soo laabteen xabsiga. muddo 3-sano ah taas oo keentay in la xiro 5 xabsi.
Ballanqaadkiisu wuxuu sidoo kale gaarsiiyay xabsiyada Talyaaniga: Palermo, Mazara del Vallo, Venice iyo xabsiyada Basilicata. Hawl sifiican loo qeexay "rasuulnimada" oo Prem Rawat uu baahinayay tobanaan sano wuxuuna ku qeexay inuu yahay "kala-guur bulsho oo nabadeed"
Sida uu sheegay wasiirka cadaalada Bonafede qofkasta oo gala xabsi wuxuu u taagan yahay fashilka bulshada. Soo furashada dadka khaladka sameeyay oo ka dhigaya inay noqdaan qayb wax soo saar leh waa guul. Tani waa maalgashiga ay tahay inay gobolladu sameeyaan si ay uga caawiyaan ka saarista halista soo noqoshada, taas oo sidoo kale ka faa'iideysan karta bulshada.
Nidaamka sharciga ee talyaaniga, dib-u-waxbarashadda xukunka xukunku wuxuu aqoonsi ka helaa farshaxanka oo ay ka mid yihiin 27 ee Axdiga Dastuuriga ah oo oranaya, “Waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado waddo waxbarasho oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo koritaanka wacyiga ee aragtida dib-u-dhexgalka bulshada dhexdeeda, halkaas oo inta badan ku saleysan ficil leexsan ay jirto is-wacyigelin la'aan. ”
Ms. A. Maiorino iyo Senator Lomuti
Senator (iyo garyaqaan) Arnaldo Lomuti ayaa mar kale ku celiyay: "Ciqaabtu kama koobnaan karto daaweyn ka soo horjeedda aadanaha laakiin waa inay lahaataa hawl dib-u-celin ah oo ay tahay inaan ku qabanno fursad uu maxbuusku ku fahmo qaladaadka la sameeyay oo uu u saxo u janjeerkiisa nolosha bulshada ka soo horjeedda, dabeecaddiisa u waafaji qiyamka bulshada - dariiqa dib-u-barashada ee ah inay dadka fahamsiiso cawaaqibka dabeecadaha qaarkood iyo cilaaqaadka dadka dhexdooda ah.
"Waxaan booqday xabsiyada Basilicata aniga iyo asxaabteyda safarka ah ee safarka ah Piero Scutari, waxaan la kulanay gudiga maamulka ee xukuma deegaanadan, waxaana ogaanay inay tahay aduun nafteeda," ayuu yiri Senator Lomuti.
Ilaa iyo inta xoogga nabada ay ka weyntahay tan rabshadaha, waxaan marwalba heli doonaa rajo ah inaan awoodno inaan helno dal iyo bulsho ka wanaagsan. Wuxuu soo xigtay ereyadii Nelson Mandela ee uu ku qeexay aayadaha qalbiga ka hadla:
“Waxaan marwalba ogaa in qalbiga aadanaha ay kujiraan naxariis iyo deeqsinimo. Qofna kuma dhalan neceb nimankiisa kale sababo la xiriira jinsiyada, diinta, heerka uu ka tirsan yahay. Haddii ragga ay bartaan naceybka waxay baran karaan jacaylka, maxaa yeelay jacaylka qalbiga aadamuhu wuu ka dabiici badan yahay nacaybka. Aadanaha dhexdiisa, wanaaga waa la qarin karaa laakiin gabi ahaanba lama damin karo. ”
Senator Alessandra Maiorino, oo ku howlan howlaha bulshada, ayaa tiri: "Maxaabiista diida dambigooda waxay igu soo celiyeen bulshada Homeric halkaas oo quluubta iyo maskaxda ragga iyo dumarka ay hareeyeen dareen lagu beeray maskaxdooda."
Maanta, waxaan ognahay in shucuurteenu ka dhalatay gudaha oo aysan ku beeran ilaahyo ama jinniyo ka baxsan jirkeena iyo maskaxdeena. Haddana waxaan u sii wadeynaa inaan u dhaqanno si la mid ah sidii raggaas iyo dumarkaas lagu sharraxay gabayadii hore ee aan iyagu laftoodu ahayn inay ku kacaan waxyaalo ay ka toobad keenaan oo ay ku kafaaro-galaan dembigooda cimrigooda oo dhan. Waxay dareemeen inay ahaayeen dhibanayaal xoogag ka baxsan iyaga. Waxbarista Mr. Rawat “Naftaada Ogow” ayaa runtii ah furaha isku dheelitirka gudaha.
Socrates wuxuu ku adkeystay helitaanka fariinta "Wanaagsan waa u qalantaa" iyo in qofna uusan qalad ku sameynin rabitaankiisa xorta ah. Waxaa la yiri xirida xabsiyada waxay wax ka taraysaa keyd dhaqaale. Rawat wuxuu ka hadlay jajabka bulshada - dadka qaar waxay ku dhaheen "hadaan ogaan lahaa barnaamijkaan goor hore, waligey dib uguma noqon lahayn xabsiga." Maxaad uga sugeysaa dadku inay qaladaad sameeyaan, inay jabiyaan kuwa qoran oo si qayaxan loo sharaxay, sida: "Markaad ka gudubto xariiqdaas, markaa ciqaab baa jirta?" Xalku wuxuu kujiraa iskuulka. Barida caruurteena inay naftooda ogaadaan, waxbaridna u muujiyaan naxariis
Ereyada ka soo baxa qalbiga ee sida saxda ah loogu hadlo waxay u adeegi karaan inay noqdaan jaranjarooyin wadada fahamka ah. Ogaanshaha sida loo dhagaysto waxa dadka kale dareemaan, ogaanshaha naftooda, akhrinta shucuurtooda iyo kuwa kuwa kale waxay ka dhigan tahay inaad la jaanqaadi karto waxa inagu xeeran. Seneca ayaa tiri: “Waxaan ku qaadaneynaa nolosheena daryeelka wax kale, taasi nolol ma ahan, waa wakhti madhan. In kasta oo nolosheennu aysan intaas gaarin, waxaan haysannaa waqti macquul ah oo aan ku noolaanno, laakiin waxaan ku bixinnaa waxyaabo aan faa'iido lahayn. Xaqiiq ahaan, qaybta nolosha aan runta ku nool nahay waa tan ugu gaaban. Waxbarista Prem Rawat waa inay galaan iskuullada; markaa runtii waan xiri lahayn xabsiyada. Waxaan rajeynayaa in dhamaanteen aan cimri dheeri sii ahaan karno isla markaana aan haysanno waqti madhan oo gaagaaban. ”
Prem Rawat oo jooga aqalka Senate-ka ee Rome
Aragtida qareen caan ah, Oreste Bisazza Terracini
Garyaqaanka Oreste Bisazza Terracini, (OBT), wuxuu aqbalay codsiga si uu u muujiyo ra'yigiisa ku saabsan mowduuca looga hadlay golaha guurtida, wuxuu ku raacay mowqifka kuwa ka walaacsan soo kabashada bulshada rayidka ah ee dadka ku xadgudbay sharciyada wada noolaanshaha bulshada. taasi waa in dib loogu soo celiyaa macnaha bulshada iyo muhiimada uu muwaadinku u leeyahay suurtogalnimada in lagu dhex daro bulshada ay daryeelayaan laga bilaabo dhalashadiisa, isagoo waliba tixraacaya iskuulka, qoyska.
Halkan, sidoo kale, hadalku wuxuu noqdaa mid ballaadhan, caddee OBT, maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa suurtagalnimada wax ka qabashada muwaadin da'yar oo qaan-gaar ah guud ahaan. Wuxuuna raaciyay: “Waxaan saameyn ku yeelan karnaa shaqsiyan ama qof si gaar ah laba qaab: midkood adoo weydiisanaya shucuurta, ka dib ku tiirsanaanta shucuurtiisa, ama ka faa'iideysiga caqligiisa, caqligiisa caqligiisa, maskaxdiisa. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in maskaxda lagu tiirsanaado in badan - ma aha inay iyagu dooni waayaan inay in badan isku halleeyaan si loo qanciyo, laakiin sababta oo ah doodaha u baahan sababaynta si fudud uma dhacaan, halka caadifaddu tahay mid aad loo heli karo. ”
Iyo, su'aasha ah: maxaa lagu tixgelin karaa xaaladdan oo kale marka laga hadlayo dareenka, wuxuu ku jawaabay: "Wax, laga yaabee kii ugu da'da weynaa ee aan baari karno ee la xiriira adeegsadaha maaddadan, raalli iga ahaada haddii aan ugu yeero arrin , waa diinta. Taasi waa, waa lagama maarmaan in la saameeyo dareenka aadanaha ee diinta, maxaa yeelay, wuxuu ku qanacsan yahay in dabeecadda ay tahay inay ahaato mid wanaagsan, sababtoo ah khuraafaadka sababta shucuurta shucuurta, waxaa jira suurtogalnimo badan oo ah inuu markaa u dhowaado qaybta caqliga leh ee maskaxda hab ku filan. Marka, wuxuu dib u cusbooneysiinayaa soo dhaweyntiisa Hindisaha Prem Rawat, kuwa muujiyay xiisaha ay u qabaan mowduuca oo doonaya inay horay u sii wadaan. ”
Wuxuuna u arkaa wixii Senator A. Maiorino soo jeediyay mid togan oo la mahadiyo, in si qaddarin leh loogu hayo. Garyaqaanka Oreste Bisaza Terracini wuxuu ku soo gabagabeeyey awoodiisa ah "Isuduwaha Ururka Xuquuqda Aadanaha," isagoo soo jeedinaya helitaankiisa si uu u awood u yeesho inuu qoto-dheereeyo mawduuca iskuna dayo inuu ku firfircoonaado arimahan.